ဗိုလ်မှုးချုပ် ဟောင်းအောင်ကြီး ကွယ်လွန် | Freedom News Group
ဗိုလ်မှုးချုပ် ဟောင်းအောင်ကြီး ကွယ်လွန်
by FNG on October 25, 2012	ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး (ငြိမ်း) စာရေးဆရာ သခင်အောင်ကြီး (ပေါင်းတည်) သည် အသက် ၉၄
နှစ် အရွယ် ယနေ့ နံနက် တွင် ကွယ်လွန် သည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။ သခင်အောင်ကြီး (ပေါင်းတည်) သည် ၁၉၁၉ ၌ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါင်းတည်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး
ကျောင်းသား ဘဝမှစကာ နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်နှင့်
ဖက်ဆစ် ဂျပန်ခေတ်တို့၌ တပ်မတော် အတွင်း ရာထူး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ခေတ်၊ အိမ်စောင့် အစိုးရခေတ် တို့တွင် တပ်မတော်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့များ၌
ဆက်လက် တာဝန်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ဦးဆောင်သော တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်အာဏာ
သိမ်းယူပြီးနောက် ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေး စနစ်ကို ပုံဖော်ရာ တွင် ပြည်သူပိုင် သိမ်းသည့် ကိစ္စ၌
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း နှင့် သဘောထား ကွဲလွဲကာ အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်မှ နုတ်ထွက် ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း အုပ်ချုပ်နေစဉ် (၁၉၆၂-၁၉၈၈) ကာလ အတွင်း သုံးကြိမ်
ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်မှုးချုပ် ဟောင်း အောင်ကြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ လူထု အုံကြွ မှု တွင် အရေး
ပါသည့် စစ်တပ် အရာရှိ ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဦးနေ၀င်း ကို ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် စတင် တည်ထောင် စ က တည်း က ပင် ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
သတင်း နောက်ခံ နှင့် ဓာတ် ပုံ အား ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ပဋိပက္ခ နောက်ဆုံး ဖြစ်ပွား နေသည့် ကျောက်ဖြူ တွင် လုံခြုံရေး အဆင့် တိုး မြှင့်
ဘန်ဂါဇီ ရှိ အမေရိကန် သံရုံး တိုက်ခိုက်မှု သံသယ ရှိသူ အီဂျစ် တွင် အသေဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ →
Bo Aung Gyi said that Army is never misunderstood by even mind! and If Burma didn’t get Democracy,my self sucide but when he talked to peoples at Badonemar campus,Sanchaung,Myae Ni Kone,Rgn,Burma in 1988,wear steel jacket because of fearing of MI’s assisnation!
October 25, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,526,219 hits
Thailand will hold elections by February 2; Yingluck may not be her party's choice to run, government spokesman says. 19 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearPH flounders in wushu; Myanmar leadsUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar gives relief to CebuMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearMyanmar president visits northern CebuMyanmar off to perfect start in SEA GamesWant Burma info in your inbox each morning?